Richard Quest dia mbola ao amin'ny Seychelles Quest ihany!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Richard Quest dia mbola ao amin'ny Seychelles Quest ihany!
Taorian'ny fitsidihana an-tsakany sy an-davany ny tany nosy tamin'ny volana feb taona tamin'ity taona ity, CNNNy vatofantsika fanta-daza sady mpanao gazety iraisam-pirenena Richard Quest dia niverina Seychelles nandritra ny folo andro teo ho eo.
Ity fitsidihana ity dia mikendry ny famerenana ny laoniny ny seho “Quest's World of Wonder” izay taratry ny zava-misy ankehitriny.
Nandritra ny fitsidihany farany, ny mpanao gazety britanika dia nanohina ny fandraisana tamim-pitiavana sy talanjona tamin'ny kolontsaina tsara tarehy any Seychelles naneho hevitra momba ny zavatra niainany tany amin'ireo nosy hafahafa izay nilaza fa, "Seychelles dia toerana miavaka miaraka am-potaka misy olona sy natiora tsy mampino."
Ny fitsangatsanganana an-gazety an'ny CNN dia notohanan'ny Seychelles Tourism Board (STB) amin'ny tanjona hanomezana fahitana ny toerana haleha.
Antenaina ny hametraka ny nosy amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray, Andriamatoa Quest sy ny ekipany dia nidina tany Seychelles avy any Dubai tamin'ny sidina Emirates Airlines ny alakamisy 29 oktobra 2020 lasa teo.
Toy izany koa, ho an'ireo mpitsidika avy amin'ny firenena napetraka ao amin'ny lisitra sokajy faha-2 an'ny firenena nahazo alalana hiditra an'i Seychelles, antenaina hanaraka ny fombafomba ampiharina amin'ity vondrona ity izy telo mianadahy ao anatin'izany ny fitokana-monina ao amin'ny hotely hataon'izy ireo mandritra ny dimy andro manaraka ary hanomboka ny iraka iasany tamin'ny 4 Novambra 2020.
Ny ekipan'ny CNN dia hizaha ny harenan'i Seychelles ary hitsidika ny Nosy Mahé sy Praslin.
Raha niresaka momba ny fitsidihana fanindroany nataon'i Andriamatoa Quest tamin'ity taona ity dia nilaza ny Lehiben'ny Executive STB Mrs Sherin Francis fa zava-dehibe ny fahitana hatrany ny firenena amin'ny fotoana rehetra mba hitazomana ny sain'ny mpitsidika hatrany ary mandritra izany fotoana sarotra ho an'ny indostria izany.
“Faly izahay mandray an'i Mr Quest any Seychelles indray. Ity fitsidihana ity dia tonga amin'ny fotoana mahamety azy izay zava-dehibe indrindra ny fanaovana dokambarotra ary tombony azo antoka ho an'ny alehantsika izay manaporofo an'izao tontolo izao fa i Seychelles no toerana azo antoka atolotry ny ekipan'ny STB antsika ary manantena ny hahita an'i Seychelles amin'ny tambajotra CNN izahay. , ”Hoy Ramatoa Francis.
Ao anatin'ny famelomana indray ny indostrian'ny fizahantany eto an-toerana ho an'ny voninahiny feno, ny mpiray tsikombakomba amin'i Seychelles dia namolavola ary tsy mitsahatra ny mametraka fepetra fiarovana azo antoka mba hiantohana ny fiadanan'ny mpitsidika sy ny filaminan'ny mponina ao an-toerana.
Ny fisehoan'i Seychelles ao amin'ny programa CNN TV no ho tampon'ny fahitana ny toerana haleha manerana ny kaontinanta rehetra ao amin'ny tamba-jotra CNN sy ny media sosialy.
Ny programa dia ny voalohany amin'ireo andiana fampandrenesana Seychelles antenaina ho raisina amin'ny tambajotra mankany amin'ny 2021.
Miditra ny vanim-potoana vaovao i India Air Travel